Jaljala Online – Page 32 – Jaljala Online
दाङमा पनि खुल्यो ‘कपडा बैंक’, के हो कपडा बैंक, के गर्छ यसले ?
साउन २१, दाङ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ थर्कुडाँडा निवासी रामबहादुर सुनार र उनका छोरा कमल मंगलबार बिहान खुसी देखिन्थे। यो खबर नारायण खड्काले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । सित्तैमा कपडा पाएपछि उनीहरुमा खुसी छाएको हो। रामबहादुरले मन परेको एउटा पाइन्ट र सर्ट लगे। कमलले टिसर्ट लगे। पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिका अन्तर्गत सुन्दरखाल निवासी १३ […]
आज कहाँ-कहाँ हुन्छ वर्षा ? सावधानी अपनाउन आग्रह
साउन २१, काठमाडौं । आज (मंगलबार) देशका केही स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आज केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यमसम्म र पश्चिम पहाडका एक/दुई स्थानमा भने भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ। आगामी २४ घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै महाशाखाले भनेको छ : देशका केही स्थानमा मेघ […]
डोरी टाँगेर खोला वारपार
साउन २१, ललितपुर । गतवर्ष असारमा लगातार पानी परेपछि लुभू-लामाटार सडकखण्डमा पर्ने गोदावरी खोलाले एउटा कार बगाएको थियो। यो खबर नितु घलेले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेकी छन् । कारधनीलाई सुरक्षित बाहिर निकालियो। तर कार निकाल्न सकिएन। महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर रामेश्वर श्रेष्ठका अनुसार डोजरको सहायताले कार बाहिर ल्याउने प्रयास गरिएको थियो। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि […]
वर्षायाममा हरियो सागसब्जी कत्तिको स्वस्थ्यकर ? जानी राखौ
सागसब्जी खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ । तर, वर्षायाममा ? मौसममा आउने परिर्वतनले हाम्रो जीवनशैलीमा पनि प्रभाव पार्छ । हामी आफ्नो जीवनशैली मौसमको हिसावले परिवर्तन गर्न बाध्य हुन्छौं । जाडो समयमा न्यानो र तातो खानेकुरा हाम्रो रोजाईमा पर्छ भने गर्मी मौसममा चिसो र शितलता प्रदान गर्ने खानेकुरा र पहिरनको छनौट गर्छौं । यी मौसम बाहेक […]
Posted on August 5, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
दाङका युवा नेताले गरे प्रगतिशील विवाह, सबै खर्च सामाजिक संस्थालाई
साउन २०, काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा निकट अनेरास्ववियूका नेता नरेश रेग्मी र डा. क्षमता सुवेदीले नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडांडामा प्रगतिशील विवाह गरेका छन्। वर रेग्मी साविक माओवादी केन्द्र निकटको अखिल(क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सचिव हुन् भने वधु सुवेदी क्रान्तिकारीकी समर्थक हुन्। विवाह समारोहको आयोजना अनेरास्ववियू केन्द्रीय कमिटीले गरेको हो। झापा दमककी सुवेदी र दाङ तुलसीपुरका रेग्मीलाई […]
Posted on August 5, 2019 August 5, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
बढ्यो मनसुनी गतिविधि, कहिलेसम्म हुन्छ बर्षा ?
साउन २०, काठमाडौं । मनसुनी न्यून चापीय रेखा औसत स्थान भन्दा केही उत्तर तर्फ अर्थात नेपाल नजिक सरेकाले मनसुनी गतिविधि केही सक्रिय भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपालतिर सरेसँगै केही दिनदेखि कमजोर अवस्थामा रहेको मनसुन पुनः सक्रिय हुने क्रममा रहेको मौसमविदले बताएका छन् । हाल देशभर सामान्यदेखि […]
रोल्पाकी यी युवती खुट्टा घिसार्दै स्कुल गएर एसइई पास गरिन, अब के छ उनको इच्छा ?
साउन १९, दाङ । रोल्पाकी कमला घर्तीमगरका दुवै खुट्टा छैनन्। हात टेकेर र खुट्टा घिसारेर हिँड्छिन्। सानैदेखि यसैगरी विद्यालय आउने-जाने गरिन्। यो खबर नारायण खड्काले सेतोपाटीमा लेखेका छन् । जन्मथलो रोल्पाको करेटीमा उनले ५ कक्षासम्म पढिन्। पहाडको उकालो-ओरालो गर्नु त्यति सजिलो थिएन। दैनिक विद्यालय जान मात्रै उनले एक घन्टा बढी हात टेक्दै खुट्टा घिसार्दै हिँड्नुपर्थ्यो। […]
Posted on August 4, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
यस्तो छ ३ दिनको मौसम पूर्वानुमान, सतर्क रहन मौसमविद्को सुझाव
साउन १९, काठमाडौं । आज (आइतबार) देशका केही स्थानमा चट्याङ पर्ने तथा भारी वर्षा हुने सम्भावना औंल्याउँदै सतर्क रहन मौसमविद्ले आग्रह गरेका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार बिहान २४ घण्टे चेतावनी जारी गर्दै भनेको छ- देशका केही स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ पर्ने सम्भावना रहेको तथा मध्य र पूर्वका पहाडी भूभागका एक वा दुई स्थानमा भारी वर्षाको […]